Football Khabar » कोपा अमेरिका : अर्जेन्टिनालाई हराउँदै ब्राजिल फाइनलमा !
कोपा अमेरिका : अर्जेन्टिनालाई हराउँदै ब्राजिल फाइनलमा !
लिओनल मेस्सीको टिम अर्जेन्टिनालाई हराउँदै ब्राजिल कोपा अमेरिका फुटबलको फाइनल प्रवेश गरेको छ । आफ्नो भूमिमा जारी प्रतियोगिताअन्तर्गत आज बिहान भएको सेमिफाइनल खेलमा पाहुना टोली अर्जेन्टिनालाई २–० ले स्तब्ध बनाउँदै ब्राजिल फाइनल प्रवेश गरेको हो । यससँगै देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जित्ने मेस्सीको सपना पुनः एकपटक चकनाचुर भएको छ । मिनेराओ रंगशालामा भएको खेलमा ब्राजिलले अर्जेन्टिनामाथि खेलभरि पकड जमाउँदै निर्धारित ९० मिनेटमै नतिजा निकाल्न सफल भएको हो । ब्राजिलले पहिलो र दोस्रो हाफमा गरी १–१ गोल गरेको थियो । उसका लागि पहिलो गोल १९औं मिनेटमा ग्याब्रिएल जेससले गरेका थिए । बक्सभित्र रोवर्टो फर्मिन्होले दिएको क्रस पासमा अनमार्क रहेका जेससले सहजै गोल गरेका थिए ।
त्यसपछि अर्जेन्टिनाले खेल बराबरी गर्ने एक सुनौलो मौका बनाएको थियो । करिब ३० यार्ड दूरीबाट कप्तान मेस्सीले हानेको फ्रि किकमा सर्जियो अगुएरोको हेडिङ बल बारमा लागेर फर्किंदा अर्जेन्टिना खेल बराबरी गर्नबाट चुकेको थियो । पहिलो हाफमा १–० को अग्रता बनाएको ब्राजिलले दोस्रो हाफमा पनि १ गोल थप्यो । उसका लागि खेलको ७१औं मिनेटमा रावेर्टो फर्मिन्होले गोल गरेका थिए । जेससले मैदानको मध्यभागबाट एक्लै दौडाएर लगेको बल अर्जेन्टिनाका डिफेन्डरको पंक्तिलाई कठिन गरी छलाउँदै दिएको पासमा फर्मिन्होले कुनै गल्ती नगरी बललाई जाली चुमाएपछि ब्राजिल खेलमा २–० को सहज अग्रतासहित जिततर्फ अघि बढेको थियो । दोस्रो गोल खाएपछि अर्जेन्टिनाका लागि खेलमा पुनरागमनको सम्भावना थप कठिन बनेको थियो ।
त्यसपछि बाँकी समयमा दुवै पक्षबाट थप गोल नभएपछि खेल ब्राजिलले २–० ले जित्यो । अब ब्राजिलले फाइनलमा अर्को दिन हुने चिली र पेरुको दोस्रो सेमिफाइनल खेलको विजेतासँग उपाधिका लागि भिडन्त गर्नेछ । अब भोलि (बिहीबार) बिहान दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा चिली र पेरु खेल्नेछन् । त्यसपछि सेमिमा पराजित दुई टिमले तेस्रो स्थानका लागि खेल्नेछन् । यो खेल जुलाई ७ मा हुनेछ । सेमिका विजेता टिम जुलाई ८ मा उपाधिका लागि भिड्नेछन् । ब्राजिल फाइनल पुगिसकेको छ भने दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा चिलीलाई फाइनल पुग्न सक्ने दोस्रो सम्भावित टिमका रूपमा हेरिएको छ । यसपटक प्रतियोगिता आयोजक ब्राजिललाई प्रमुख उपाधि दाबेदार टिम मानिएको छ । यसपटक ब्राजिलसहित उरुग्वे, अर्जेन्टिनालाई प्रमुख दाबेदार टिमका रूपमा हेरिएको थियो ।
प्रकाशित मिति १८ असार २०७६, बुधबार ०२:२१